Indlu epholileyo e-rustic kwindawo ephezulu (indawo yonke)
Yakhiwe ngokutsha indlu yasehlotyeni yosapho kwindawo yaseŽelivka (indawo yokugcina amanzi ekhuselweyo yasePrague). Yiba nepiknikhi kwisitiya esi-1 kwezi-2 (enye enechibi eliyi-4x2m), kwindawo ezolileyo, khe uhambe, ulobe, ukhwele ibhayisekile, ukhwele umlambo, uchole amakhowa & namaqunube okanye undwendwele iinqaba/i-chateaus kunye ne-gastro-tourism ngexesha leentsuku kwaye emva koko uphumle iziko. Ubusi bendawo bukhona
Ngenxa yokhuseleko lwendawo, mhlawumbi ayiphuhliswanga. Kutshanje ukuvuka, amaxabiso aphantsi kwaye abakhenkethi bamkelwe
indawo, isitayile esihlaziyiweyo se-rustical ukuze uhlale kwaye uphumle. Ivenkile yegrosari yasekhaya ngasemva kwekona yesidlo sakusasa. Iziko lokurisayikilisha (iplastiki/iglasi/iphepha) ecaleni kwevenkile ngokunjalo. Idolophu yaseLedeč emva kwenduli enePenny Market (iBilla ngasemlanjeni, iibhula zendawo njl njl kwisikwere esikhulu). Ukupaka phambi kwendlu okanye ngasevenkileni (ukuba iimoto ezininzi ziza); Isikhokelo sasekhaya esineengcebiso zolonwabo kunye nohambo olujikelezayo lunikiwe;)
Iibhedi ezi-2 zomntwana ezikhoyo (120cm x 60cm) zonke zibandakanya + ukutshintsha itafile njl.
IiTV ezi-3 ezifumanekayo: 1) indawo yomlilo 2) iinyosi (ngasemva kwegadi enkulu) 3) iseti rhoqo ibhokisi yetob yeTV kunye neprojekti ekhoyo yeemuvi (zisa iPC/Mac yakho, HDMI). Indawo yokupaka yasimahla, i-wifi yasimahla..
Siza kuthumela ikhonkco elineenkcukacha lesikhokelo sasekhaya kunye neenkcukacha zendlu (ebhalwe kwaye yavavanywa sithi), njengoko inokwenzeka emva kokubhukisha.
Ubuninzi bokuhamba kakuhle, amachibi (ukuloba i-trout), iinkuni, indawo ekhuselweyo ye-Želivka reservoir. Enye idolophu encinci iLedeč (inqaba) emva nje kwenduli ene squash, i-bowling, iindawo zokutyela ezimbalwa ezintle kunye nekhefi enkulu yaseKovárna. Jonga ulwazi lwabakhenkethi eLedeč (i-mainsquare) malunga nokuba kuqhubeka ntoni kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Kwi-sauna enkulu yaseKouty kunye nendawo yokutyela..
Ngaphakathi kweekhilomitha ezingama-20 uBernard; idistillery/umlindo/ivenkile yezinto ezilungileyo/indawo yokutyela elunge kakhulu ngokutya kwasekhaya eBohdaneč; ukumila komlambo iStvořidla; iinqaba eLedeč naseLipnice; iiChateau eZruč naseSvětlá; iifektri zeglasi eTasice naseSázava; Kwi "Hulice" ekufutshane umntu unokutyelela kumgama wokuhamba: Umboniso wendlu yaManzi, Umboniso wehlabathi weenyosi, iibhulorho zikaHitler ezingagqitywanga nohambo lokuya edamini laseZelivka (ukwenza amanzi okusela ePrague).